Ikopi yee-AirPod ezigqitha ngaphaya kokuziphatha | Ndisuka mac
Ikopi yee-AirPods ezigqitha ngaphaya kokuziphatha
Nanini na xa iApple ikhupha imveliso entsha, iikopi ziyavela. Ezi kopi ngamanye amaxesha azithembeki kangangoko zinako, kodwa kwimeko apho Namhlanje sikuphathela ikopi engenazintloni kunye nomda wokungaziphathi kakuhle.
Kucacile ukuba xa iApple izakubeka imveliso entsha kwintengiso, ityale imali eninzi kwi-R + D + I kuba umhlaba esiwuphuhlisayo awuyeki ukuvela kwaye ubuchwephesha kunye netekhnoloji ziyahambelana.
Enye yeemveliso iApple engayekanga ukuthengisa ukusukela oko yaziswa Ii-AirPods, ummangaliso wobunjineli obuncinci obuye bunyanzeliswa ziimpawu ezenziwa ngu-Apple kuzo.
Kucacile ukuba umbono ofanayo ngaphandle kweentambo ukongeza kwindlela abanayo kunye nemeko apho babekwa khona ukuze baphinde bazenze zibenze ukhetho oluhle kakhulu ngaphandle kwexabiso labo nangona li-euro ezili-179 liphantsi kakhulu kunoko sinokukufumana kwezinye iimveliso ezinje ngeSamsung, iApple Beats okanye iBose.
Ewe, abathandi bekopi banokonwaba kuba ukuba into abayifunayo kukuba nee-headphone ezingenazingcingo ezimile kwii-AirPods ngaphandle kokuba zii-AirPods, amaTshayina sele ewenzile umsebenzi wawo kwaye kakuhle kakhulu. Sifumene kumnatha ikopi ethembekileyo yee-AirPods kwaye xa sisithi ukuthembeka kulungile kakhulu kuba Ekuphela kwento etshintshayo luhlobo lokugqitywa kweplastikhi engamhlophe kangako kwaye ingakhazimli kunye nee-sensors ezinazo ii-headphone ethe kulo mzekelo itshintshelwe kumaqhosha.
Ixabiso, ewe, liphantsi kakhulu ke kuya kubakho abantu abaninzi abanomdla kule mveliso. Kukho iimodeli ezintathu ngokuxhomekeke kubume bendlebe yakho yendlebe kuba, njengoko usazi, iApple isungule umlinganiso kuphela ukuze ii-AirPod zingalungelanga bonke abantu. Iimodeli ziyazibiza I7S, I8S kunye ne-I9S.
Njengoko ubona, iimeko ezinazo ziguquka kancinane kunye nokumila kwee-headphone. Le ikopi ethembekileyo ye-Apple yimodeli ye-I9S kwaye ibandakanya ibhegi yothutho ukongeza kwibhendi ebazibandakanyayo ukuze singalahleki ngenxa yokuwa. Amaxabiso alo aqala I-25,81 i-euro ukuya kwi-31,31 ye-euro kwaye ungafunda ngakumbi malunga nabo kule khonkco ilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ikopi yee-AirPods ezigqitha ngaphaya kokuziphatha
jojojojo Sele ndinazo izigqoko zokuzivikela ezintsha xD
Khusela iMacBook Pro Retina ngale mkhono wemvulophu yerabha
I-logoist 3, ngoku iyafumaneka kwiVenkile ye-Mac